SAAXMEEGAAG: Waxaa socda kulamo xal loogu raadinayo beelihii dagaalamay – Radio Daljir
SAAXMEEGAAG: Waxaa socda kulamo xal loogu raadinayo beelihii dagaalamay
Janaayo 4, 2022 7:13 b 1
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dimuqraadiyeynta Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo uu wehlinayo Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash, ayaa kulamo xal raadin ah ka bilaabay Deegaanada sangajabiye iyo Saax-maygaag.
Ujeeddada safarka weftigaan ayaa salka ku hayey sidii xal nabadeed oo waara looga gaari lahaa dirir soo noq-noqotay oo deegaamadaas ku dhexmartay laba beelood oo walaala ah, waxayna kulamo kala duwan la qaateen war garadka iyo Odayaasha Deegaankaas.
Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanu ka tegi doonin deegaanka illaa xal waara laga gaarayo, maadaama ay dirirtu soo noq-noqotay, sidoo kale aan la aqbali karin in dagaal kasii socdo Saax-maygaag iyo Sange Jebiye Dowladduna ay qaadan doonto doorkeeda kama dambaysta ah ee lagu raadinayo nabadda iyo xasiloonida deegaanka.
Dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Deegaanada sangajabiye iyo Saax-maygaag ayaa waxaa ku geeriyooday lix ruux halka ku dhawaad 20 kale ay ku dhaawacmeen.
Haiti: Ra’iisul Wasaaraha oo ka badbaaday isku day dil
Ciidanka NISA oo sameeyay howlgallo dad lagu qab qabtay
SULEKMAN DUCAALE 5 months ago
Waa ku faraxsanahay in sulux laga dhex wado beelaha walaalaha ah ee volaafu dhex martay.
Laakiin waxaa protocol xuma ah inaad tidhaahdaan Wasiir Dhabacad oo uu la socdo M/xigeen karaash ayaa nabaddayn ka wada Saaxmeeygaag. Miyaanay ahayn inaad todhaahdaan M/xigeenka iyo.wefdi uu wato oo wasiir Dhabancad ka mid yahay baa hawshaas wada. Miyaan protocol ku sidaa ahayn mise wax kale ayaa jiraa. Kollay sidaas aan dawladnimada aan aqiin baa sidaas ah. Kollay xilligan oo weliba madaxwdynuhu maqan yahay waxaa Hogaanka dawladda oo dhan wada ku xigeenkiisa Mise wax kale ayaa jira
Intaasi waa iga sixid iyo toosin ee ceebahigama aha.
Inshallah subluxa socda guul baan u rajayanayaa. Kan ka socda Bosaaso isagana guul baan u rajaynayaa.